အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်ရှေ့ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး ကျည်ထိမှန်ဆုံးပါး – PVTV Myanmar
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်ရှေ့ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး ကျည်ထိမှန်ဆုံးပါး
၇ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် အောင်သာယာရပ်ကွက်ရုံးအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပစ်ခတ်ခဲ့ရာမှာ နေအိမ်ရှေ့မှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၆ရက်နေ့ ည ၈နာရီခန့်မှာ အောင်သာယာရပ်ကွက်ရုံးအနီး အသံဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲအပြီးမှာ စစ်အုပ်စုက နေအိမ်တွေကို ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “အဲ့ဖက်လူတွေ ပြောတယ် အိမ်တွေကို တမင်ပစ်တာတဲ့၊ အိမ်ရှေ့မှာ ဆော့နေတဲ့ကလေးလေးခေါင်းကို ကျည်မှန်ပြီး ဆုံးသွားတယ်တဲ့၊ ကလေးမိဘတွေနာမည်တော့ မသိသေးဘူး၊ ပြီးတော့ အဲ့ကောင်တွေကဆဲဆိုပြီး ပြောသွားတယ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေဆိုပြီး”လို့ ဒေသခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်။အခုလို လူနေအိမ်တွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်မှုဟာ စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီး လူစိတ်မရှိသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်ပြောကြားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေ ယခုအချိန် အထိ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်နဲ့ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အသက် (၁၈) နှစ်အောက်ကလေးငယ် (၈၀) ကျော်သွားပြီဖြစ်ကာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကလေးဦးရေကလဲ ၂၄၃ ဦးရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ လူ့အခွင့်အ ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရန်ကုန်မှာ တော်လှန်လူငယ်တွေက စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
ယင်းမာပင်မြို့နယ်ရဲ့ ရွာပေါင်းစုံသပိတ်ကလည်း စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ၄၀၉ ရက်မြောက် ဆန္ဒပြ
ဒီတပတ်ရဲ့ တော်လှန်ရေးနည်းပညာအနေနဲ့ “လုံခြုံစွာ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း” ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းမဲ့သံချောင်းသား မဲခေါင် says:
2021-12-07 at 2:43 PM
ဦး ငယ် says:
2021-12-07 at 2:45 PM
Paulina Nei Nei says:
2021-12-07 at 2:51 PM
2021-12-07 at 3:40 PM
ရဲ့နဲ့ စစ်သား ကိုမေကိုလိုးများ ကြောင့် အပစ်မယ့် သူတွေ အသက်တွေ ဆုံးရှုံးနေကြရပီ
ေက ေက says:
2021-12-07 at 3:51 PM
KI War says:
2021-12-07 at 5:35 PM
Nyo Mar Kyaw says:
2021-12-07 at 5:50 PM
မအလ ခွေးသူတောင်းစားတွေ…. အောက်တန်းစား အယုတ်တမာတွေ…. ပြည်သူအများစုက ဒီလောက် မုန်းတီးပြီး အလိုမရှိကြောင်းပြနေတာ ကန်ချင် ပင်းချင်ယောင်ဆောင်ပြီး စောက်ရှက်မရှိ အာဏာမက်ပြီး ၇ ရက်သားသမီးကို အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်နေတုန်း
Thęț Thęț says:
2021-12-07 at 6:43 PM
Äung Cho says:
2021-12-07 at 7:15 PM
သားသမီးရှိတော့ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာတယ် ဒီချိန်မှာမိဘတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ပူဆွေးသောကရောက်နေမလဲ ခွေးတွေမင်းတို့တွေဝဠ်ပြန်လည်အုံးမှာမြင်ယောင်သေးတယ် မြန်မြန်လည်ပါစေလိုလဲဆုတောင်းတယ်
2021-12-07 at 8:25 PM
Happy Lay says:
2021-12-07 at 9:06 PM
မင်းတို့ သေ ရမှာပါ
Kaung Lin Myat says:
2021-12-07 at 10:01 PM
2021-12-07 at 10:02 PM
အဲ့ေခြးေတြဆဲေနလို႔ငရဲဘဲကီးမွာ ကေလးအတြက္ဆုေတာင္းၿပီးအမ်ွေပးေဝ ၿပီးရင္ click
Aye Myat May says:
2021-12-07 at 10:46 PM
မိဘတွေ ကလေးကို သတိထားကြပါ ဆော့တဲ့အရွယ်ဆိုလဲ မျက်စိအောက်အပျောက်မခံပါနဲ့ လူ့တိရစ္ဆာန်တွေ လူစိတ်မရှိတဲ့ဟာတွေ
Aungmin Aung says:
2021-12-07 at 11:26 PM
Soe Min Khaing says:
2021-12-08 at 3:42 AM
ငါနဲ႔ေထာင္ပို႔ခ်င္တယ္ လပ္တီ း
Nilarwin Nila says:
2021-12-08 at 6:39 AM
အနာဂတ် အညွှန့်အဖူးလေးတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ခြွေနေတာ စကစ နင်တို့အလှည့်ကျမနွဲ့စတမ်းနော်
2021-12-08 at 11:11 PM
2021-12-09 at 4:09 PM
ရန်ကုန်တိုင်း ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်က “နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံး ချက်ချင်းလွှတ်” စာတမ်းပါ စာရွက်များ ကပ်ချိတ်သည့် လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်းများ
Radio NUG – Dec 7th, 2021, 2:30PM